သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီ - Marine Diesel Basic
သင့်ရဲ့ privacy နဲ့အွန်လိုင်းလုံခြုံရေးငါ့ထံသို့အရေးကြီးလှသည်။
အီးမေးလ်ကသို့မဟုတ်အခြားသတင်းအချက်အလက်မငျသညျအခွင့်အာဏာရှိသည်ဟုဝယ်ယူမှုတစ်ခုပြီးစီးရန် မှလွဲ. 3rd ပါတီများနှင့်အတူမျှဝေသည်။
MailChimp နှင့် EngineMailer မှထိန်းသိမ်းထားသောအီးမေးလ်စာရင်း။
အဆိုပါ website တွင်အဘယ်သူမျှမကြော်ငြာ။
အဘယ်သူမျှမ "retargeting" ကြော်ငြာ။
သငျသညျထို site ပေါ်တွင်မှတ်ချက်သို့မဟုတ်ထောက်ခံစာစွန့်ခွာလျှင်, မှတ်ချက်များ form မှာပြသဒေတာ, သင့် IP လိပ်စာနှင့် browser ကိုအသုံးပြုသူအေးဂျင့် string ကို spam များကိုထောက်လှမ်းကိုကူညီစုဆောင်းနေကြသည်။
လျှင်သင် ဘေးဖယ်-In (သင်နောက်တစ်ကြိမ်ဤအသေးစိတျထဲမှာဖြည့်ရန်မလိုပါကြောင်းဒါ) သင့်အမည်, အီးမေးလ်လိပ်စာနှင့် website ကိုကယ်ဖို့ဤအချက်အလက်တစ်နှစ်အကြာတွင်သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီးသော cookies များကိုသိမ်းဆည်းလိမ့်မည်။
သင်တစ်ဦး Gravatar ကိုသုံးပါလျှင်, သင်၏အီးမေးလိပ်စာကနေဖန်တီးထားတဲ့အမည်ဝှက် string ကို (လည်း hash ကိုခေါ်) သင်ကကိုအသုံးပြုနေလျှင်ကြည့်ရှုရန် Gravatar ပေးနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ Gravatar ဝန်ဆောင်မှု privacy ကိုမူဝါဒကဒီနေရာမှာရှိနိုင်ပါသည်: https://automattic.com/privacy/ ။ သင့်ရဲ့ထင်မြင်ချက်၏ခွင့်ပြုချက်ပြီးနောက်သင်၏ပရိုဖိုင်ပုံကသင်၏ထင်မြင်ချက်များ၏အခြေအနေတွင်အများပြည်သူမြင်နိုင်သည်။
သင်တစ်ဦးမှတ်ချက်သို့မဟုတ်ထောက်ခံစာစွန့်ခွာလျှင်, မှတ်ချက်သို့မဟုတ်ထောက်ခံစာနှင့်၎င်း၏ metadata ကိုသတ်မရှိထိန်းသိမ်းထားကြသည်။ မည်သည့်နောက်ဆက်တွဲ-ups အလိုအလျှောက်မယ့်အစားတစ်ဦးဖြည့်ညှင်းတန်းစီ၌သူတို့ကိုင်ထား၏အသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီအဖြစ်ပါတယ်။
မှတ်ချက်များနှင့်ထောက်ခံစာများအလိုအလျောက် spam များကိုထောက်လှမ်းဝန်ဆောင်မှုမှတစ်ဆင့် check လုပ်ထားနိုင်ပါသည်။
ဒီ site ပေါ်တွင်ဆောင်းပါးများရံဖန်ရံခါ (ဥပမာစသည်တို့ကိုဗီဒီယိုများ, ပုံများ, ဆောင်းပါးများ,) embedded အကြောင်းအရာပါဝင်နိုင်သည်။ တစ်ဦးဧည့်သည်အခြားက်ဘ်ဆိုက်သွားရောက်ခဲ့ပြီးမူလျှင်ကဲ့သို့သောအခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များကနေ embedded အကြောင်းအရာအတိအကျတူညီလမ်းအတွက်ပြုမူ။ ဤဝက်ဘ်ဆိုက်များ, သင်နှင့် ပတ်သက်. ဒေတာစုဆောင်း cookies များကိုအသုံးပြုနောက်ထပ် Third-party ခြေရာခံခြင်း embed လုပ်ဖို့, သင် account တစ်ခုရှိသည်နှင့်ကြောင်းကွန်ရက်စာမျက်နှာအတွက် logged နေကြသည်လျှင် embedded အကြောင်းအရာနှင့်သင်၏အပြန်အလှန် tracing အပါအဝင်ကြောင်း embedded အကြောင်းအရာ, နှင့်သင်၏အပြန်အလှန်စောင့်ကြည့်လိမ့်မည်။
ငါ phishing, သင်နှင့် malware ကနေရေကြောင်းဒီဇယ်အခြေခံ website ကိုစောငျ့ရှောကျဖို့နောက်ဆုံးပေါ်လုံခြုံရေး software နှင့်အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်ကိုအသုံးဖို့ကွိုးစားခြင်းနှင့် spam များကိုစသည်တို့ .. လုံခြုံရေးခြေလှမ်းများပါဝင်သည်:
ဝဘ်လိပ်စာဘား၏လက်ဝဲဘက်အပေါ်အစိမ်းရောင်သော့ခလောက် - က်ဘ်ဆိုက် https ကိုလိုက်နာသည်။
website ကို SiteGround အားဖြင့်တည်ခင်းဧည်နှင့် Cloudflare, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကို web performance ကိုနှင့်လုံခြုံရေးကုမ္ပဏီ (မှတစ်ဆင့် operatedcloudflare.com)
အသစ်ကလုံခြုံရေး firewall က Wordfence plug-in ကိုဟက်ကာဆန့်ကျင်က်ဘ်ဆိုက်ရဲ့ WordPress ကိုကာကွယ်ရေးခိုင်မာစေရန် activated, malware များစသည်တို့ကို
က်ဘ်ဆိုက်၏လုံခြုံရေးအဆင့်အတန်း Securi SiteCheck (နေဖြင့်အပတ်စဉ်ဓြှုsitecheck.sucuri.net) နှင့်နင်္ဂနွေနေ့တိုင်းဒီစာမျက်နှာပေါ်တင်ခဲ့သည်။
လုံခြုံရေး ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏စစ်ဆေးမှုကိုဇွန်လ ၂၃ ရက်၊ ၂၀၂၀
သင်သည်ဤ website တွင်မှတ်ချက်များသို့မဟုတ်ထောက်ခံစာကျန်ရစ်ခဲ့ကြပါလျှင်, သင်ပေးကြပါပြီမည်သည့်ဒေတာများအပါအဝင်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ၏တစ်တင်ပို့ဖိုင်လက်ခံရရှိရန်တောင်းဆိုနိုင်သည်။ သင်တို့သည်လည်းမည်သည့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များဖျက်ခံရသည်ဟုတောင်းဆိုနိုင်သည်။ ဤသူသည်ငါ, အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေရေးရာ, ဒါမှမဟုတ်လုံခြုံရေးရည်ရွယ်ချက်များအတွက်စောင့်ရှောက်ဖို့တာဝန်ရှိကြောင်းငါမဆိုဒေတာများမပါဝင်ပါ။